प्रधानमन्त्रीज्यू,यो जमिन फिर्ता गर्नुहुन्छ ? – YesKathmandu.com
गुनासो / उजुरीदेशस्तम्भ
शुक्रबार २८, साउन २०७३
सत्तामा पुग्दा नतमस्तक भएर भारतका अघि लम्पसार पर्ने सत्ता बाहिर पुगेपछि बाघ जस्तो गर्जने नेपाली नेताहरुको चरित्र नै हो । यही प्रवित्तिका कारण भारतले वर्षौ देखी ६० हजार हेक्टर भन्दा बढी जमिन मिज्दा समेत हाम्रा नेताहरु ‘चुँ’समेत बोल्न सकेका छैनन ।
सरकारले हालै मात्र गृहमन्त्री बिमलेन्द्र नीधिलाई भारत र अर्थमन्त्री महरालाई चीन पठाउने तयारी गरिरहेको छ । आम सर्वसाधरणको बुझाई यो सरकार दक्षिणकै जोडबलमा बनेको निश्कर्ष छ । के गृहमन्त्री नीधिले भारतले मिचेको सीमाको बारेमा केही कुरा उठाउलान ? राजनीतिक विश्लेषकहरु यस्ता कुरा पत्याउदैनन । बरु भन्छन‘ सीमास्तभ्भको कुरा उठाउने कुरा त परै जाओस,गृहमन्त्री नीधिले फाष्ट ट्रयाक भारतलाई सुम्पेर आँउछन ।’
सीमाविद्हरुका अनुसार,भारतसंग जोडिएका नेपालका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लामा सीमा विबाद छ । भारतले २१ जिल्लाका ७१ भन्दा बढि स्थानमा नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको छ । उनीहरुका अनुसार,भारतले लगभग ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भू–भाग भारतले मिचेको विभिन्न तथ्यहरुमा देखिदै आएको छ ।
यी मध्ये कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै ३६ हजार नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लाहरुमा ९ हजार हेक्टर जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित हुन पुगेको छ ।
यतिमात्रै होइन,भारतले पुर्व मेचिदेखि पश्चिम माहाकालीसम्म पुग्दा भारतसंग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा चारसय ७४ सीमास्तम्भ भारतले गायब पारेको छ ।नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा जोडिएको छ । भारतसंग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा मात्र नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना गरिएको छ । त्यो पनि सीमाभन्दा ३–४ किलोेमिटर भित्र रहेको छ । कतिपय ठाउमा त सदरमुकामै छ,सीमा सुरक्षा बल । हराएका भनिएका सीमा स्तम्भ कि त भारतीय पक्षले रातारात उखेलेर फालेको छ भने कतिपय प्राकृतिक प्रकोपका समयमा हराएका छन् । हराएका स्तम्भमा सहायक स्तम्भ ४५ वटा र साना स्तम्भ चार सय ३१ वटा छन् । नेपालका पाँच हजार ९ सय ४७ कूल सीमा स्तम्भमध्ये चीनतर्फ ११ र भारततर्फ पाँच हजार ९ सय ३६ छन् । तीन हजार ८० सीमा स्तम्भमात्र सामान्य अवस्थामा रहेका छन् । भारततर्फ रहेका अधिकांश स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र केही पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । कतिपयलाई नदीले पनि बगाएको बताइन्छ ।
४५ हजारको अगाडि ४५ सय
नेपाल भारत सीमामा भारतले ४५ हजार सेना तैनाथ गरेको छ । अर्थात् प्रत्येक एक किलोमिटरमा २५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । छ भने औषतमा प्रत्येक तीन किलोमिटरमा एक क्याम्प हुन आउछ । नेपालले भने सीमा सुरक्षाका लागि ४५ सय देखि ५ हजारको बीचमा सशस्त्र प्रहरी खटाएको छ,त्यो पनि सीमाभन्दा निकै टाढा । एकजना सशस्त्र प्रहरीका डिआइजीका अनुसार अहिले हराएका ती स्तम्भ खोज्न सरकारलाई निकै समस्या भइरहेको छ । हराएका स्तम्भमा जंगे पिलर ९ मुख्य स्तम्भ २८ वटा रहेका छन् । जो सबै भारतसंगको सीमाका स्तम्भ हुन ।
गल्ति जति एयरलाइन्सको दोष जति मृतक पाइलटको !
‘तीजमा ब्यूटिफुल बन्नु छ, एउटालाई आइ लभ यू भन्नुछ’
डा केसीको जीवन रक्षाका लागि सहयोग गर्नुपर्छ : मन्त्री थापा
आज मन्त्रिपरिषद् बैठक साझ ५ बजे बस्दै
फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर लामटाङमा दुर्घटना
‘देश विभाजन गर्ने आन्दोलनको माग र नारा होइन, अराजकता हो’ –ओली
संसार जित्ने बहादुर गोर्खा सैनिक युरोपियन अदालतमा पराजित
प्रदेश नं २ मा कुन दलको कस्तो दावी ? कांग्रेस १००, एमाले ५३ प्रतिशत र माओवादी ४०